တိုကျိုမြို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ဒုစရိုက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖူးသော Hasegawa Heizo - JAPO Japanese News
တိုကျိုမြို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ဒုစရိုက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖူးသော Hasegawa Heizo
ဟူး 13 Apr 2022, 14:54 ညနေ
အဓိကဆာမူရိုင်းခေတ်ကိုဦးတည်ထားတဲ့ TV drama ဖြစ်ပြီး၊ ဂျပန်မှာတော့ အဖိုးကြီး၊ အဖွားကြီးတွေ Ocha ကိုသောက်ရင်းကြည့်ကြတဲ့ ဒရမ်မာဖြစ်ပါတယ်။
ဒရမ်မာပေါင်းများစွာရှိတဲ့အထဲမှာ ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဒရမ်မာတစ်ခုရှိတယ်။
Onihei Hankachō (鬼平犯科帳)
စာရေးဆရာ Shōtarō Ikenami ရဲ့ဝတ္ထုကို မှီငြမ်းထားတဲ့ဒရမ်မာဖြစ်ပြီး၊ သရုပ်ဆောင် Nakamura Kichiemon II ဟာ ဒီဒရမ်မာထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ထားတာ တော်တော်အသက်ဝင်ပါတယ်။
ဒီဒရမ်မာရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ 長谷川平蔵 Hasegawa Heizo ဟာ အပြင်မှာတစ်ကယ်ရှိသူဖြစ်ပြီး၊ လူငယ်ဘဝက ဒုစရိုက်တွေချည်းပဲလုပ်ခဲ့ပေမဲ့၊ နောက်ဆုံးမှာ အမှန်တရားရဲ့ သူရဲကောင်းဖြစ်သွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့ဘဝကို နားထောင်လှည့်ပါအုံးဗျာ…
Heizo သက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့တာက ၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်းဖြစ်တယ်။
နောက်ဆုံးဆာမူရိုင်းခေတ်ဖြစ်တဲ့ အဲဒိုခေတ်ထဲမှာရှိနေသေးပေမဲ့၊ ၂၆၀ ခုနှစ်လောက်အဓွန့်ရှည်ခဲ့တဲ့ အဲဒိုခေတ်ကြီးဟာ အရှုပ်ထွေးဆုံးအရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။
၁၀ နီးပါးကြာခဲ့တဲ့ အစာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးဘေးကြောင့် ငတ်ပြတ်ပြီးသေသွားကြသူတွေ ၁.၄ သန်းရှိခဲ့တဲ့အပြင် 浅間山 Asama တောင်ရဲ့ အကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူပေါင်း ၂ သောင်း သေကြေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးဘဲ ကျိုတိုတစ်ခုလုံးမီးလောင်ပြင်လိုဖြစ်သွားတဲ့ မီးဘေးကြီးကလည်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီသက်ရောက်မှုတွေကြောင့် ဆန်ဈေးဟာ ရုတ်တရက်ခုန်တက်ပြီး၊ အဲဒိုပြည်သူ ခန့်မှန်းချေ ၁၀၀၀ ခန့်ဟာ လုယက်အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်လာကာ သူဌေးအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေကို ဓါးပြတိုက်မှုတွေ ပေါ်လာပါတော့တယ်။
ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်၊ စားစရာမရှိတဲ့ လယ်သမားနဲ့ မြို့သူ/သားတွေဟာ ခိုးဝှက်ပြီးအသက်ဆက်ခဲ့ကြတယ်။ အထူးသဖြင့် အဲဒို(ယခုတိုကျို) မှာ နယ်တွေကနေရောက်လာတဲ့ လူပေါင်းစုံဟာ ဓါးပြအကြီးစားတွေဖြစ်ကုန်လို့ တရားဥပဒေကင်းမဲ့တဲ့ အကျည်းတန်မြိုကြီးတစ်ခု ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွက် မြို့သူမြို့သားတွေကို ညအချိန်အပြင်မထွက်ဖို့ တားမြစ်ချက်ထုတ်ရတဲ့ အခြေအနေကိုရောက်သွားပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုရှုပ်ထွေးသွားတဲ့ အဲဒိုမြို့ပြကြီးမှာပေါ်လာတာကတော့ Hasegawa Heizo ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Hasegawa Heizo ဟာ 火付盗賊改方 ဆိုတဲ့ ယနေ့ခေါ်ကြတဲ့ (အထူးရဲတပ်ဖွဲ့) ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဆိုတဲ့နေရာမှာ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရပါတယ်။
火付けဆိုတာ တစ်နည်းအားဖြင့် မီးရှို့ခြင်းပါ။
သူခိုးဟာနာမည်အတိုင်းခိုးပါတယ်၊ လူကိုသတ်ပြီး‌တောင် ရွှေတွေလုယက်ကြတဲ့ လူတွေဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ဒီသူခိုးတွေကို ရှင်းပစ်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုပေးထားတဲ့အပြင် ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Heizo တစ်ယောက် ဒီတာဝန်ကို ၉ နှစ်ယူခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီး အဲ့ဒီကြားထဲမှာ ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့အမှုပေါင်းက ၂၀၀ ကျော်ဖြစ်တယ်။
သမိုင်းတစ်လျှောက် အတွင်းရေးမှူးအဆက်ဆက်မှာ အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုလို့တောင် သတ်မှတ်ခံရပါတယ်။
ဒါကြောင့် Heizo ကို 鬼平（おにへい） “ အိုနီးဟဲအိ” လို့တောင်ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။
鬼の平蔵 (မကောင်းဆိုးဝါး Heizo) ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပေါ့၊ ဘယ်လိုမကောင်းဆိုးဝါးလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်။
ဒီနေရာမှာ Heizo ရဲ့လူသားဆန်မှု များစွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
Heizo မွေးဖွားခဲ့တာက ၁၇၄၅ ခုနှစ်ဖြစ်တယ်။
ငယ်နာမည်မှာ 銕三郎 တက်ဆူဆာဘူရို
အဖေဖြစ်သူက သိပ်တော့အဆင့်မမြင့်ပေမဲ့ ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တစ်ဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်ပြီး၊ 火付盗賊改方 ရဲ့အတွင်းရေးမှူးဖြစ်လာတဲ့ သားဖြစ်သူကတော့ နောက်ဆုံးမှာ ခန့်အပ်ခံရတဲ့အလုပ်မှာ အလုပ်ရရှိသွားပါတယ်။
နောက်ဆုံးကျိုတိုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အဖေဖြစ်သူက Heizo အသက် ၂၈ မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။
ကျိုတိုကနေ အဲဒိုကိုပြန်တဲ့အချိန် လိုက်ပို့ခဲ့တဲ့လူတွေကို Heizo ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်။
Heizo Hasegawa ကို မယုံနိုင်စရာသူရဲကောင်းလို့ ကမ္ဘာကပြောကြလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီအချိန် အကုန်လုံးကကြီးမြတ်လာပြီး အဲဒိုကိုရောက်လာကြရင် သေချာပေါက် တွေ့ကြမယ်။
အထူးသဖြင့်ဘာမှမလုပ်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်က ဘာကိုကြီးမြတ်စရာအကြောင်းရှိမှာလဲလို့ အားလုံးကတွေးမိသွားကြပါတယ်။
အဲ့ဒီလို Heizo ဟာ အခုအချိန်မှာ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်လာပေမဲ့၊ လူငယ်ဘဝ အဲဒိုမှာနေထိုင်စဥ်ကတော့ တော်တော်ဆိုးသွမ်းတဲ့လူငယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
(Honjo ရဲ့တက်ဆူ) ဆိုတဲ့နာမည်ပြောင်တောင်ပေးခံရပြီး၊ ယနေ့ခေတ် Sumida ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ Honjo ဆိုတဲ့နေရာမှာ နံပါတ်တစ် ဆိုးသွမ်းလူငယ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဓါးပညာမှာလည်း အရမ်းတော်တဲ့ လက်ရုံးရည်ရှိသလို၊ နှလုံးရည်နဲ့ပြည့်စုံသူလည်းဖြစ်တယ်။
ဒီအပြင် နောက်လိုက်တွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်မှုလည်းရှိတယ်။
မြို့လယ်ခေါင်ဖြစ်တဲ့ Honjo ရဲ့အနီးတစ်ဝက်က ဆိုးသွမ်းလူငယ်တွေအားလုံးဟာ Heizo စကားဆို နားထောင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဲ့လိုလူက စောစောကလို စကားကြီးစကားကျယ်တွေပြောနေတဲ့အတွက် နားထောင်ရသူဘက်က ရယ်ချင်မိမှာပါပဲ။
ပြဿနာအများကြီးရှာခဲ့တဲ့ ရူးကြောင်ကြောင်သားဖြစ်သူက သူရဲကောင်းဆန်တဲ့စကားတွေပြောလာတာကတော့ကောင်းပေမဲ့၊ အဲ့ဒီလိုပြောပြီး ၁ နှစ်လောက်အထိ အလုပ်အကိုင်မည်မည်ရရမရှိခဲ့ပါဘူး။
နောက်ပိုင်း ၁၇၇၄ ခုနှစ် ၄ လပိုင်းမှာ အဲဒိုရဲတိုက်ရဲ့ ကိုယ်ရံတော်ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက်အဖြစ် အလုပ်ရရှိသွားပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်ကိုက်မှာပဲ အစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာတော့တယ်။
လူပေါင်း ၁၀၀၀ ရဲ့ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကို နှိမ်နင်းဖို့အတွက် Heizo အပါအဝင် ဆာမူရိုင်း ၄၀၀ ကိုစုစည်းပြီး၊ အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို တစ်ဖက်ကနေဖမ်းခဲ့ကြတယ်။
အဲ့ဒီအထဲမှာလည်း Heizo ရဲ့လုပ်ဆောင်မှု အတော်လေးအထင်ကြီးစရာဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
ဒီကနေ သူ့ရဲ့အကြီအကျယ်ပါဝင်လှုပ်ရှားမှု စတင်တော့တယ်။
သူတို့ထဲမှာ နှိမ်နင်းချေဖျက်သင့်တဲ့မကောင်းမှုနဲ့ အဲ့လောက်မဆိုးတဲ့မကောင်းမှုကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပိုင်းခြားထားပါတယ်။
တရားဥပဒေအတိုင်းမဟုတ်ဘဲ၊ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုလဲ ဆိုတဲ့အခြေခံအချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ Heizo ဟာ ရာဇဝတ်သားတွေကို ၂ မျိုးခွဲပြီး အပြစ်ပေးပါတယ်။
လူတွေမသိအောင် တိတ်တိတ်လေးခိုးပြီး ပြန်သွားတယ်။
သူခိုးကြီးလို့ခေါ်ခံကြတဲ့လူတွေဟာ အရင်ကအားလုံး ဒီလိုစည်းဘောင်ထဲကနေ ခိုးခဲ့ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ မိတဲ့အခါ သတ်ပစ်တာတို့၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာတို့အထိ လုပ်ဖို့မလိုဘူးလို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ အဲ့ဒီအချိန်မှာထပေါ်လာကြတဲ့ ဓါးပြတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းကိုအသုံးချခံအဖြစ် ပစ်မှတ်ထားတဲ့ဆိုင်မှာ နှစ်အနည်းငယ်ကြာ အလုပ်လုပ်ခိုင်းပြီး အဲ့ဒီချိန်အတွင်းမှာ အိမ်ခန်းဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ သော့တွေရဲ့အစီအစဥ်ကို တိတ်တဆိတ်သတင်းပေးပြီး ခိုးယူကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံစံအတိုင်းခိုးရင်တော့ ထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့ ဓါးပြတွေကတွေးခဲ့တယ်။
ယူနိုင်သမျှကိုယူတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကို အဓမ္မကျင့်သူတွေလည်း များစွာရှိခဲ့ပါတယ်။
Heizo အတွက်တော့ ဒီဓါးပြတွေဟာ ခွင့်မလွှတ်နိုင်စရာ အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။
ခေတ်ဟောင်းသူခိုးတွေကတော့ သူငယ်ချင်းရလာရင်တောင် သူခိုးလုပ်ဖို့ခွင့်မပြုဘဲ ဒုစရိုက်လောကကို တိတ်တဆိတ် စောင့်ကြည့်ခိုင်းပါတယ်။ ဓါးပြတွေကတော့ ရလာတဲ့အချက်အလက်ပေါ်မူတည်ပြီး ရှင်းသင့်ရင်ရှင်းပြီး နှုတ်ပိတ်လိုက်ကြတယ်။
ဓါးပြတွေဟာ အပေါင်းအပါတွေရဲ့အချက်အလက်ကိုမပေးဘူးဆိုရင် ၎င်းတို့ကို စေ့စပ်တဲ့ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ ဖော်ထုတ်ကြပါတယ်။
ဓါးပြတွေအတွက်တော့ တကယ်ကို မကောင်းဆိုးဝါးမိစ္ဆာလိုပါပဲ။
ဒါနဲ့ပဲ ဓါးပြတော်တော်များများဟာ မကောင်းဆိုးဝါး Heizo ရှိတဲ့အတွက် အဲဒိုမှာဒီလိုကျက်စားနေလို့ မဖြစ်တော့ဘူးလို့တွေးပြီး၊ အဲဒိုမှာငြိမ်းချမ်းရေးကို ပြန်ယူဆောင်လာပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီလိုဆိုးတဲ့ Heizo ပါ။
လူသားဆန်တဲ့နွေးထွေးမှုကို ဝတ္ထုနဲ့ ဒရမ်မာမှာတွေ့ရပေမဲ့၊ အပြင်ကသူ့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာလည်း နွေးထွေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခု ထွက်လာခဲ့တယ်။
အလုပ်များသူဖြစ်တာတောင် မြို့ထဲမှာ လင်မယားနှစ်ယောက်ရန်ပွဲကိုမြင်လိုက်ရပြီး ကြားဝင်ဖြန်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးဘဲ ထိုလင်မယားရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ဖို့ မကြာခဏ ထိုလင်မယားဆီလာလေ့ရှိပါတယ်။ Heizo တစ်ယောက် ခဏခဏလာနေတဲ့အတွက် ထိုစုံတွဲလည်း ရန်ဖြစ်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘဲ၊ အရင်အတိုင်း ပြန်သင့်မြတ်သွားကြပါတော့တယ်။
နောက်ပြီး အခုကျွန်တော်တို့ခေါ်နေတဲ့ အိမ်ခြေရာမဲ့ပြဿနာကို အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်း ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါ။
အိမ်ခြေရာမဲ့တွေဟာ ဒုက္ခရောက်လာရင် ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နိုင်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချပြီး၊ သူတို့တွေအတွက် နေစရာနေရာကို ဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ခြေရာမဲ့နဲ့ ရာဇဝတ်မှုငယ်ကျူးလွန်သူတွေကိုနေရာချပေးပြီး၊ အလုပ်အမျိုးမျိုးကိုသင်ယူတတ်မြောက်စေပြီးမှ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲ ပြန်လည်ခေါ်ယူပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒုစရိုက်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင် Heizo ဟာ မသက်ဆိုင်သူတွေကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေခြင်းမျိုး၊ အမျိုးသမီးတွေကို အဓမ္မကျင့်စော်ကားခြင်းမျိုး မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီအပြင် အတိတ်ကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိဘဲ၊ အားလုံးကိုအမှန်အတိုင်းဝန်ခံထားတာကလည်း သူ့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ ခံယူချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒုစရိုက်လုပ်ဖူးတဲ့အတွက်လည်း ဒုစရိုက်သမားရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို နားလည်နိုင်သူဖြစ်တယ်။ ဒီအပြင် တားဆီးနိုင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတားဆီးပြီး၊ ကန့်သတ်ချက်ကျော်လွန်တဲ့ ရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုတော့ လုံးဝခွင့်မလွှတ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုလူသားဆန်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ Hasegawa Heizo ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ပုံဖော်ထားတဲ့ ဝတ္ထုနဲ့ဒရမ်မာကလည်း သေချာပေါက် ကြည့်သင့်တဲ့ ဒရမ်မာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်သောမကောင်းမှု လို့တင်စားခံရတဲ့ ယာကူဇာများ။
အတူတူတိုက်ခိုက်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ(သူပုန်)ဖြစ်သွားတဲ့ နောက်ဆုံးဆာမူရိုင်း။ Saigo Takamori
ဒီပုဂ္ဂိုလ်သာမရှိခဲ့ရင် ဂျပန်ရဲ့လုံခြုံရေးက ယိုယွင်းနေခဲ့မလား? လုံခြုံရေးကောင်းမွန်ခြင်း ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းအဆင့်ကို ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်း
အမေရိကန်တွေတောင် ဆွံ့အသွားကြတဲ့ အဲဒိုခေတ်အများသုံးရေချိုးကန်ရဲ့ သရုပ်မှန်
ကျောင်းမသွားဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရလား ?
Shinto ဆိုတာဘာလဲ? ဂျပန်လူမျိုးတွေယုံကြည်ကြတဲ့ Shinto ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာလာ?